Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ku soo laabtay shaqada shir jaraa’id ku qabtay xafiiska Oval | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ku soo laabtay shaqada shir jaraa’id...
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ku soo laabtay shaqada shir jaraa’id ku qabtay xafiiska Oval
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku soo laabtay shaqadiisa waxa uuna shir jaraa’id ku qabtay xafiiska Oval wax ka yar hal todobaad ka dib markii laga helay cudurka coronavirus.
Madaxweynaha ayaan yeelan astaamaha lagu yaqaan ‘Covid-19’ wax ka badan 24 saacadood, qandho la’aanna waa in ka badan afar maalmood, sida uu sheegay dhakhtarkiisa, Sean Conley.
Farriin muuqaal ah oo uu soo duubay Arbacadii, ayuu Mr Trump ku sheegay inuu dareemayo “wax weyn”, isagoo raaciyay: “Waxaan u maleynayaa inay tani ahayd nimco iiga timid Ilaahay.”
Wuxuu sheegay inuu doonayo dhammaan dadka Mareykanka inay helaan daaweyntii la siiyay.
Mr Trump wuxuu kale oo uu ballan qaaday inuu si bilaash ah lagu bixin doono dawooyinka ay soo saarto waaxda dawada Regeneron.
Wuxuu sheegay in tijaabada daweyneed ee la siiyay usbuucii la soo dhaafay ay ahayd mid daawo ah halkii ay ka ahaan lahayd qiyaas, isagoo intaa ku daray in boqolaal kun oo qiyaasood ah ay ku dhowaadeen inay diyaar yihiin Laakiin daawooyinka Regeneron ma aysan ansixin nidaamiyeyaasha federaalku.
“Tani waxay ahayd nimco qarsoodi ah – waan qabtay, waxa aan maqlay dawadan, waxaan idhi aan qaato, waana wax aan caadi aheyn,” ayuu yidih, isagoo raaciyay inuu raadin doono ogolaansho isticmaalka deg degga ah ee daawadan.
Madaxweyne Trump wuxuu cusbooneysiiyey weerarradiisii Shiinaha, isaga oo u sheegaya dadka Mareykanka: “Waxba idinkama khuseeyaan. Adiga khaladkaaga ma ahayn in tan ay dhacday. Waxay ahayd Shiinaha khaladkiisa. wuxuu ahaa khaladka Shiinaha. “
Mar sii horeysay, Dr Conley wuxuu sheegay in madaxweynaha uusan u baahnayn wax oksijiin dheeri ah tan iyo markii uu cisbitaalka aaday jimcihii. Waxaana laga soo fasaxay Isniintii.
Taageerayaasha Mr Trump ayaa sheegaya in uu muujiyay hoggaamin tan iyo markii uu ka soo baxay isbitaalka. Laakiin dadka ka soo horjeedaa waxay leeyihiin dhaqankiisu wuxuu noqdey mid iska kacsan
Aqalka Cad ayaa sidoo kale dejiyay tallaabooyin cusub oo nabadgelyo ah kadib markii Madaxweyne Trump uu ka soo laabtay cisbitaalka iyo warka ku saabsan in kaaliye kale uu qaaday Covid-19.
Doorashada madaxweynaha waa 3da Nofembar. Mid ka mid ah arrimaha muhiimka ah ee ka hor maalinta codbixinta ayaa ah xidhmo dhaqaale oo kor loogu qaadayo dhaqaalaha uu saameeyey coronavirus . Mr Trump wuxuu u muuqday inuu ka tanaasulay wadaxaajoodkii uu lalahaa Dimuqraadiga Talaadadii,
Previous articleOrod yahanka Joshua Cheptegei oo jabiyay koobka oroddada 10,000m ee ragga
Next articleDuqsi Caan ka Noqday Dalka Mareykanka oo muda Daqiiqada Madaxa ka saarnaa Madaxweyne ku Xigeenka